lundi, 31 octobre 2016 22:38
Mahajanga : Novakian’ny jiolahy ny fasam-bahiny eo La Corniche
Efa potika ny vato tamin'ny fasana ary tazana ny vatapaty tao anatiny vao tsikaritry ny mpiambina fa nisy namaky ny fasana ny sabotsy 29 oktobra 2016 tokony ho tamin’ny iray ora maraina. Nitsoka kiririoka ny mpiambina, ka vaky nandositra ireo mpamaky fasana, nisy enin-dahy teo. Fanin-telony izao no nisy nikasa hamaky ity fasam-bahiny, izay eo ambany fitantanan’ny Kaominina ambonivohitr’i Mahajanga ity. Nohamafisina ny fiambenana noho io tranga io.
lundi, 31 octobre 2016 16:23
RN44 - Ranofotsy: Nihotsaka lasan'ny rano ny tetezana vonjy maika
Manamboatra ny tetezana Ranofotsy, eo anelanelan'y Moramanga sy Ambatondrazaka ireo mpanao lalana. Nidaosin'ny rano anefa ilay tetezana vonjy maika natao teo.Nanomboka tamin'ny 11h30 dia transbordement sy miampita antongotra ny mpampiasa lalana rehetra. Misy ny marary dia ampitaina antongotra anaty rano.
lundi, 31 octobre 2016 07:22
Antsiranana : Hatao ny alatsinainy 31 oktobra 2016 ny Filankevitry ny minisitra mitety Faritra
Hotanterahina ny tolakandron’ny alatsinainy 31 oktobra 2016 ao amin’ny Lapan’ny tanàna Antsiranana ny Filankevitry ny minisitra mitety Faritra. Andiany faharoa ity, taorian’ny tao Toamasina tamin’ny 27 septambra 2016. Hisy ny fihaonan’ny Filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina amin’ireo mpandraharaha ara-toekarena, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo lehiben’ny sampandraharaham-panjakana eto Antsiranana.
dimanche, 30 octobre 2016 16:25
Farafangana : Nianjera avy eny ambony tafo, tsy nahatsiaro tena ilay tovolahy
Tovolahy iray nianjera avy eny ambony tafo raha saika hamono afo tamina fisiana trano may omaly sabotsy 29 oktobra ka tsy nahatsiaro tena ary nentina tany amin'ny CHRR eto Farafangana. Gaga ireo nanatitra ity tovolahy ity satria tsy taitra akory ireo mpitsabo fa mbola misakafo. Maro tokoa ny mimenomenona amin'ny fomba fiasa ao amin'ny CHRR ity noho ny avonavona sy siakan'ireo mpitsabo sasany ao, ary manampy trotraka ny tsy fahampiana sy fahanteran'ny fitaovana.
dimanche, 30 octobre 2016 15:59
Sary Sobika Ambatondrazaka
Didy-Ambatondrazaka : Mibosesika ireo teratany vahiny mpividy vato
Tsy misy mpiraharaha ny fandraràna nataon’ny Prefektiora Ambatondrazaka milaza fa voarara ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany any amin’ny Kaominina Didy, izay malaza amin’ny safira, fa dia mibosesika ireo mpividy vato, eny hatramin’ny teratany vahiny Srilankey sy Tailandey. Misy amin’izy ireo no manofa hotely ao Ambatondrazaka anaovany ny asam-barotra. Miantso azy ireny hisoratra amin’ny bokim-bahiny ny Kaominina ambonivohitra Ambatondrazaka, saingy fanontaniana tsy ahitam-baliny no apetrak'ireo vahiny hoe : « raha misoratra anarana ve izahay dia mahazo mitrandraka ? ».
dimanche, 30 octobre 2016 11:30
Ankaramena – Ivohibe : Andian-dahalo 400 nangalatra omby sy nandoro tanàna
Notafihin’ny dahalo io maraina io tao amin’ny Fonkotany Antanandava Kaominina Ankaramena Distrika Ivohibe Faritra Ihorombe. Dahalo efa mahatratra 400 any ho any no nanafika ary dia misy andiam-behivavy maromaro niaraka tamin’izy ireo. Lasan'ny daholo avokoa ny ombin’ny Fokonolona tao an-tanàna efa aman’arivony. Nodoran’ny dahalo tao anatin’izany ihany koa ny trano. Niverin-dalana ny mpanaradia satria maro loatra ireo daholo. Tsy nisy ny aina nafoy.
samedi, 29 octobre 2016 18:08
Lisea teknika Toamasina : Nahazo trano fanazarana dimy namboarin’Ambatovy
Notokanana androany ny foto-drafitrasa. Tamin’ny 1907 no niorina ny Lisea teknika Toamasina. 11 ny provizera nifandimby tao. Robson Noeline Louise Ralaimazava no amperinasa, izy ihany koa no vehivavy voalohany provizera ao, tamin’ny Lisea teknika Toamasina.
samedi, 29 octobre 2016 17:40
Zaza menavava narian-dreniny teto Sambava : Hamoaka didy ny Fitsarana amin’ny alatsinainy
Ny alatsinainy 31 oktobra izao no hamoaka « ordonnance » ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha hanome alalana izay olona afaka mandray ilay zaza vavikely, telo volana eo, narian-dreniny teto Sambava ny 26 oktobra 2016 teo. Hoesorina amin’ilay reny mitaiza azy amin’izao io zaza io na dia nilaza aza izy fa vonona ny handray azy. Antony rehefa natao ny fanadihadiana dia hita fa efa maro anaka io renim-pianakaviana nanana fandavantena io ary mbola zaza minono, dimy volana ny zanany farany, koa sarotra ny hahazoana antoka fa ho tsara karakara ilay vavikely narian-dreniny. Hatramin’izao tsy hita popoka ilay vehivavy nanary zanaka io.
vendredi, 28 octobre 2016 14:01
Vakinankaratra : Nahemotra indray ny fifidianana Filoham-pokontany
Nahemotra ho amin’ny fotoana tsy mbola voafaritra ny fifidianana Filoham-pokontany sy ny lefiny ao Vakinankaratra raha tokony hotanterahina ny alahady 06 novambra 2016 araka ny didim-pitondrana efa navoakan’ny Prefektiora.
vendredi, 28 octobre 2016 13:39
Mandalahy – Fianarantsoa : Miaramila 107 naseho ambany faneva
Notanterahina androany tao amin'ny Toby Mandalahy, Kaominina Tsarafidy ny lanonana ara-miaramila notarihin'ny lehiben'ny faritany miaramila faha-2, nametrahana ambany faneva tanora 107 andiany 2016/1 rehefa niofana nanomboka tamin'ny 18 jolay 2016 ka nifarana androany. Avy ao amin’ny 1/ RM2 ny 59, ary avy ao amin’ny SEMIPI ny 48. Mbola hanao fanompoam-pirenena mandritra ny roa taona izy ireo. (Sary Sobika Fianarantsoa)
Page 194 sur 299